Iindlela zokufaka umbala kumboniso kwiFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kukho ezahlukeneyo ubuchule bokufaka umbala kwiFotohop Ukunika ubomi kwimifanekiso yethu, ngokusebenzisa umbala wedijithali sinokufaka imibala kwimifanekiso yethu ngendlela elula nekhululekileyo enkosi kule nkqubo ivela kwindlu ka-Adobe. Dlulisa imizobo yakho kwikhompyuter kwaye uqalise ukuyifaka imibala usebenzisa isixhobo sobuchule esiya kukuvumela ukuba wenze zonke iintlobo zokubhalwa kunye nokudityaniswa kombala.
Ukuba unomdla wokuzoba kwaye ufuna ukuqala bonisa ngokufanelekileyo ungaqala ukuyenza nge Photoshop, le nkqubo iyakukuvumela ukuba udibanise ukuphinda ubambe iifoto kunye nomzekeliso kunye nayiphi na enye indlela onokucinga ngayo. Ngokukhawuleza, ilula, inomdla kakhulu kwaye kufanelekile ukuba isetyenziswe ngeendlela ezininzi.
Photoshop iyasivumela bonisa ngeendlela ezahlukeneyo kuxhomekeke kwiimfuno, sinokubonisa usebenzisa ipeni, ibrashi, iifoto (i collage) kunye nolungelelwaniso olupheleleyo lweendlela ezinokubakho apho kuphela umda kukucinga kwethu. Kule meko siza kuthi faka umbala kumzobo womgca ngokusebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zangaphakathi kwinkqubo: umlingo wand kunye nebrashi.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile fumana umzobo womgca (sketch) enemigca ephawulwe kakuhle ukuze ikwazi ukuyifaka umbala ngokucocekileyo, le migca inokucinywa kamva ukuba sifuna iziphumo ezingenasiphelo.
Nje ukuba umzobo wethu uvuleke Photoshop into elandelayo esiyenzayo yile phinda-phinda umaleko ophambili womzobo wethu ukuba yogcino. Sikhetha isixhobo umlingo wand ukusuka kwicala lecala le Photoshop kwaye senza ukhetho lweendawo esifuna ukupeyinta, siya kukhetha iindawo esifuna ukuba nombala ofanayo. Emva koku xa ukhetho lwethu lugqityiwe, siya kwenza umaleko omtsha kwaye sisebenzise umbala kuwo. Ukufaka umbala sinokukwenza nokuba sisebenzisa ibrashi kunye nokupeyinta ngaphezulu okanye ukuzalisa iindawo ezihleliweyo / ezigcwalisiweyo. Ngale ndlela kusivumela ukuba sisebenze ngendlela ecocekileyo nenocwangco ngakumbi.
La indlela yesibini ukufaka umbala nge Photoshop Umbala womfanekiso ngebrashi. Ukuze sikwazi ukwenza oku kuya kufuneka sibeke umaleko womzobo wethu ngaphakathi phinda imowudi, Olu khetho lufunyenwe ngaphezulu kwezingqimba (utshintsho oluqhelekileyo ngokuphindaphinda) luya kusivumela faka umbala ngaphandle kokuphulukana nomgca wokuzoba. Singabutshintsha ubulukhuni bebrashi kunye ne-opacity ukuba sijonga iziphumo ezibushelelezi nezonakalise ngakumbi ukubetha.
Njengokuba yayingumzobo ngesandla Ifotohop isivumela ukuba sisebenzise iibrashi ezikhethekileyo ezilinganisa ubugcisa beplastiki (amalahle, ipensile, isiphawuli ... njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Iindlela zokufaka umbala kumfanekiso kwiFotohop
Uyenza njani imeme yakho ye-Intanethi ngokulula